Posted on October 30, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	facebook မှာ lock ကျနေ တဲ့ မိမိရဲ့ အကောင့် ကို မိမိဘာသာ ပြန် hack ကျမယ်ဗျာ။ လော့ ကျနေတဲ့ အကောင့် တော်တော်များများ အတွက်အသုံးဝင်မှာပါ။ နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့ မိတ်ဆွေ တွေအတွက်တော့ပြသနာမရှိ ပေးမယ့် မြန်မာပြည်မှာ နေတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအ
security question သူငယ်ချင်း ( ၃ ဦး ) ၏ အကူအညီ ။
ဒါဆိုရင်သင့် အကောင့် ကို recovery လုပ်လို့ ရပါပြီ။ဒါကြောင့်facebook မှာ ကာကွယ်ရမယ့်အချက်တွေကတော့
အသစ်တင်တိုင်း facebook က ဖတ်မယ်ဆိုရင် ဒီမှာ like လုပ်ပေးပါ။
← အကောင်းဆုံး လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Firefox add-ons များစုစည်းမှု	SAW VI →
2 thoughts on “facebook မှာမိမိအကောင့် ကို ပြန် hack ကျမယ် (လော့ ကျသူများ ) အတွက်”	U HtUt gY! says:	November 1, 2013 at 2:01 pm	😦 @-( ကုတ်တော့ သူတို့ ကို ဘယ်တော့ ပြန်ပို့ပေးမှာလဲ အစ်ကို.. ကျွန်တော့် အကောင့်လေး နာမည် ပြောင်းတာများသွားပြီ….. ID ဆိုပြီးပဲ တောင်းနေလို့.. ကုတ် ပို့တဲ့ အထိတော့ ရသွားပြီ အစ်ကို… Reply	U HtUt gY! says:	November 1, 2013 at 2:01 pm	😦 @-( ကုတ်တော့ သူတို့ ကို ဘယ်တော့ ပြန်ပို့ပေးမှာလဲ အစ်ကို.. ကျွန်တော့် အကောင့်လေး နာမည် ပြောင်းတာများသွားပြီ….. ID ဆိုပြီးပဲ တောင်းနေလို့.. ကုတ် ပို့တဲ့ အထိတော့ ရသွားပြီ အစ်ကို… Reply	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...